Isazisi sedesktop yePlaxo-Uhlaziyo oluvela kwiNethiwekhi yakho Martech Zone
Isazisi sedesktop yePlaxo-Uhlaziyo oluvela kwiNethiwekhi
NgoLwesithathu, Aprili 23, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
IPlaxo ibe sisixhobo esiluncedo esingummangaliso ixesha elithile kwaye iqhubeka nokuba ngcono. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ndiyibethele iselfowuni kumnyango wemoto. Kwakubetha ngokugqibeleleyo, kwahluthwa ifowuni kwiziqwenga ezibini zomzimba. Ndifumene umnxeba omtsha (soloko ufumana i-inshurensi!) Ngosuku olulandelayo kodwa bendilahlekelwe yincwadi yam yedilesi.
Ndenze uphando olukhawulezileyo kwiZicelo zeVerizon ndafumanisa ukuba babenoPlaxo njengomnye wabo. Ndiyilayishe kwaye ngoku ndiyakwazi ukuvumelanisa ifowuni yam noPlaxo kubafowunelwa endikhethileyo. Undigcinele iinyanga zokuphendula iifowuni ndingazi ukuba ngubani kwelinye icala.
Ngoku kuza iPlaxo Desktop Isazisi
Xa abantu endidibene ne-twitter, ndithumela kwibhlog yabo, okanye ndenza ezinye iinguqu, ndifumana isaziso sedesktop. Ukusukela mna Landela ngokuzenzekelayo kwi-Twitter, Twhirl Ndizigcina ndixakekile kwaye ndiphoswa zii-tweets ezivela ebantwini inethiwekhi yam.
Nangona ndinetoni yonxibelelwano kwi-LinkedIn, ndiyifumene UPlaxo yeyona asethi kum kuba igcina zonke iincwadi zam zeedilesi (kunye nefowuni) zilungelelanisiwe. Andikhathali ukuhlawulela inkonzo, nokuba. Ingcezu yengqondo esazi ukuba nayiphi na ikhompyuter yam okanye ifowuni yam inokulahleka kwaye ndisenayo incwadi yam yeedilesi sisiqwenga sengqondo esifanele ukuhlawulwa!
tags: umnxeba kwisenzoubiza isenzonkqonkqozaintsebenziswanoIibhodi zokusebenzisanaumphumoU-Lewis howes
Imidiya yokuncokola imalunga nokuphunyezwa